के के छन्, अदुवा देखि तिते करेला सम्मका औषधीय गुण ? - IAUA
के के छन्, अदुवा देखि तिते करेला सम्मका औषधीय गुण ?
ramkrishna December 31, 2016	अदुवा देखि तिते करेला सम्मका औषधीय गुण ?के के छन्
खाद्य पदार्थ केवल हाम्रो पेट भर्नका लागि वा शक्ति प्रदान गर्नका लागि मात्र उपयोगी हुँदैनन् यिनीहरुमा औषधीय गुण पनि हुन्छ ।
हामीले दैनिक रुपमा प्रयोग गर्ने विभिन्न खाद्य पदार्थमा समेत औषधीय गुण रहेको हुन्छ, जसबारेमा हामीलाई पत्तो नहुन पनि सक्छ । हामीले भोक शान्त पार्न वा स्वादका लागि मात्र यस्ता परिकार खाएका हुन्छौँ तर यस्ता खाद्यपदार्थले प्राकृतिक औषधिको काम गरिरहेका हुन्छन् । औषधीय गुण भएका दश खाद्य परिकार यस प्रकार छन् :
अदुवा: अदुवालाई सर्दी वा चिसो भगाउने औषधि नै मानिन्छ । सुख्खा खोकी लागेमा, सरीरमा चिसो घुसेमा अदुवा पोलेर मुखमा राखेर विस्तारै चपाउने वा अदुवा राखेको पिरो पिरो चिया पिउनु लाभदायक मानिन्छ ।
खुर्सानी: खुर्सानीमा यस्तो तत्व पाइन्छ जसले सरीरमा दुखाइ कम गर्छ । खुर्सानी सेवन गर्नाले दुखाइ अनुभुति गराउने रसायनको उत्सर्जन रोकिदिन्छ, जसका कारण दुखाइ कम हुन्छ ।
तिते करेला: तिते करेला मधुमेहका रोगीलाई निकै लाभदायक मानिन्छ । मधुमेहका रोगीले दिनहुँ तिते करेलाको तरकारी खाएमा सरीरमा इन्सुलिनको मात्रा सन्तुलित हुन्छ ।
मह: महलाई सर्वोषधि वा सबै रोगको औषधि भनिन्छ । महको सेवनबाट सरीरका आन्तरिक रोगलाई निको पार्न सघाउ पुग्ने छ छँदैछ काटेको घाउमा मह दल्नाले पनि घाउ पाक्न पाउँदैन र छिटो निको हुन्छ ।
जैतुनको तेल कपालमा परेका जुम्रा निर्मूल पार्न कामयावी हुन्छ । यसले जुम्राबाट हुने इन्फेक्सन रोक्न मद्दत गर्छ ।
पैतला फुटेर हैरान हुनुभएको छ । यदि हो भने तपाइँले कालो चिया पिउने मात्र होइन कालो चियाले खुट्टा धुनुहोस् । कालो चियाले लगातार खुट्टा धुने बानी बसाल्दा खुट्टा फुट्ने समस्या हट्छ र तपाइँको पैतला मुलायम बन्छ ।
यदि गाडीमा चढ्दा वा यात्रा गर्दा उल्टी हुने समस्या छ भने कागती खानुहोस् र गाडिमा चढ्नुहोस् । गाडिमा बसिसकेपछि पनि लगातार कागती चाटिरहनुहोस् ।
यदि तपाइँको छाला घामले डढेको छ भने काँचो दूधले नियमित धुनुहोस् । जसले तपाइँको छालालाई उज्यालो बनाइदिनेछ ।
पानी पिउन मन नलाग्ने समस्या छ । त्यसो हो भने खरभुजा प्रसस्तै खानुहोस् । यसले फलफूल खानुको फाइदा सँगै पानीको कमीपनि हुन दिँदैन ।
भिन्डी मधुमेहका रोगीका लागि अचूक औषधि हो । भिन्डीलाई काटेर रातभर पानीमा राख्नुहोस् । अर्को विहान उक्त पानी भिन्डीका छोक्रा फालेर मज्जाले पिउनुहोस् । नियमित यसो गर्दा मधुमेहका रोगीलाई निके फाइदा पुग्छ ।
Previous Previous post: यही हो बिल गेट्स को घर
Next Next post: प्लटिङको घडेरी किन्दै हुनुहुन्छ ? होस् गर्नुस्, फस्नु होला